トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Features - ona kuburikidza nenzira mafungu ROM atsamwa nguva
Muna nepachinko yokumusoro, kuti munofunga kuti kugumbuka pachikuva kazhinji zvakanakisisa. Zvikasadaro, kunge nokuti aizova asinganyimi rokutengesa ose nepachinko yaiitirwa. In, sezvo unconventional nezviyero vakadaro nepachinko parlors, isu achasuma sei kuona kuburikidza kugumbuka patafura zvinhu.
achangozvinetesa pakarepo kunzwisisa kuti kana iwe kutarira.
agumbuka tafura yakanaka chinhu ndechokuti muropa pane chinhu kunova kwakadzama. Apo 1000 nguva uye anotyisa iri muna Zara zvakare kumira muropa kane 2,000. Mukati ROM panguva ezvinhu akadaro, achitaura Somuenzaniso, mamiriro, akadai Roulette kwave neshure achidzokorora kugumbuka nzira.
zvakare kudzokera hwandaiva upenyu, uye kazhinji kacho unogona kuva nguva refu. Agumbuka nguva, zvichatyisa vasiri mamiriro ose, ndinofunga kuti zviri nyore kunzwisisa. Pane zvakanaka panguva dzakadaro, ndechokuti nhamba paanowanikwa okuwana iri zvikuru ipfupi.
ari kuipa munguva, asi kugadzirwa dzose haazorambi kuonekwa, kuti akagumbuka nguva, kurimwa pachayo kuva zvakaoma kusiya. Mugumisiro kuripfekenura, akabuda muenzaniso kuwana, tingadai kuzoguma asina kukura.
Uyezve, kana iwe pakupedzisira akavhara jackpot, kana kuva mugumo muna imwe chete, zvichiitirwa kana kuva mugumo muedzo-musana haana uye mukana kushanduka kunyange kamwe ari mapfupi maawa kushanda. Zvadaro, zvichava yakamedza ose ayo refu-akamirirwa ukabuda bhokisi, uyewo akava zvakakodzera inivhesitimendi. Kubva ipapo, zvichaita chinorura kutenderera kana muropa kunotanga. Huchava zvinhu chokubuda kugumbuka kumwedzi.
ari nepachinko yokumusoro, nekuti tafura akaipa ezvinhu akadaro kazhinji chakanakisisa, iniwo ndinofunga mune yakawanda ruzivo zvakanakisisa waita kutsikwa pasi yakatanhamara yakadaro. Zvisinei, izvozvo hazvina musoro kuziva pashure I yakarova. Zvakaipisisa kuyerera akamirira, zvakadaro chirwere danho aibuda vasarudzirwa nani kuziva usati anorova. In
Izvi zvinobatsira kuti mashoko robo uye date yemabhuku. vhiniga Data Ona rambi girafu uye pachena akagumbuka-upenyu hunogona tsunga. Data petafura riri kwakadaro slump nguva imwe, girafu, ndinofunga kuti kure pazasi nechepakati mutsetse. Sezvo
agumbuka upenyu razova kuipa jackpot ndingangokuvara tafura refu, edza kuona pamwe chete. Mukuwedzera, chikuva kuti vava zvinhu zvakadaro agumbuka-upenyu, pane nguva apo iwe ndeimwewo kuzovazve muchina ari nepachinko yokumusoro.
kana chete chete anofanira slump aibuda, ndinofunga zvakanaka kuona pane kudiwa kana akadaro nokuti akaita pakupora machine. Zvisinei, kwete zvikuru uchiteverwa shanduro atsamwa nguva.
kuti vava yakadaro chirwere chokutambudzika features, panyaya kuti kwave kuteverwa mashoma, uyewo vaiona kuti kuramba nezvezvinhu inowanzotorwa upenyu uye zvakanaka nguva. Kamwe mava Muitiro richisimuka zvishoma nezvishoma girafu, ndinofunga kuti ndicho maoko vanzwe sei edza zvishoma raparadza kuedza. Kana paine
ona kuburikidza zvakasimba pamusoro kumuganhu simba nguva kubva agumbuka-upenyu michina, Ndianiko Zvinogonekawo kuti mumwe munhu chete mamvemve Winning pachitsuwa wematambudziko akakuitira chinhu takazarura kwete cherechedzai. Platform, iyo akapinda zvakajeka mune simba nguva, nekuti isuwo kuyeva somukwikwidzi, haagoni kuva nyore kuwana. Kutaura kana
, mutsva zvakaoma zvikuru ndiko kuona kuburikidza kumuganhu simba nguva kubva pakarepo agumbuka nguva, akanaka yakakwirira ngozi. Uchifunga, zvichaita tafura tinofunga kuti simba nguva mune magetsi mberi chimiro, zviri nani kuti kana ukawana mukana kuti mutengi chawo vari interchanged nepakati akatsiga. Ndinofunga kuti panodikanwa kutsvaka zvakanaka. Zvisinei, kwete zvikuru uchiteverwa shanduro atsamwa nguva.
, mutsva zvakaoma zvikuru ndiko kuona kuburikidza kumuganhu simba nguva kubva pakarepo agumbuka nguva, akanaka yakakwirira ngozi. Uchifunga, zvichaita tafura tinofunga kuti simba nguva mune magetsi mberi chimiro, zviri nani kuti kana ukawana mukana kuti mutengi chawo vari interchanged nepakati akatsiga.